Galaasaa Dilboo: 'ABO walitti deebisanii tokkoomsuun ulfaataa miti' - BBC News Afaan Oromoo
Jilli mootummaa Itoophiyaa MM Abiy Ahmad waliin daawwannaaf gara Awurooppaa imale Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Qaama Ce'umsaa Obbo Galaasaa Dilboo fi hooggantoota gameeyyii paartichaa waliin marii geggeessaniiru.
Jila mootummaa Itoophiyaa waliin walarginee jijjiirama amma biyya keessa jirurratti mari'anneerra, haasaa keenya keessattis wal-hubannoo gaariirra geenyeerra jedhan Obbo Galaasaan.
Yeroon biyyatti deebinu hin beekamne kan jedhan Obbo Galaasaan akkuma qophii xumuranitti gara biyyaa deebi'uun jijjirama siyaasaa biyya keessatti mul'achaa jiru akka tumsan himan.
Dhaabilee maqaa oromootiin socho'an biroo waliin walii galuun dhimma Oromoorratti kaayyoo tokkooof hojjechuuf ejjennoo akka qabanis ibsaniiru.
Jijjiiramni mul'achaa jiru akkaataa dantaa Oromoo eegsiseen akka deemuuf dhaabota Oromoo waliin waltumsinee hojjechuun kaayyoon keenya deemaa jirruuf keessaa tokkodha jedhan.
Haalli siyaasaa amma biyyattii keessa jiru kan nama hojjechiisuu danda'uudha kan jedhan Obbo Galaasaan, dhimmoota nageenyaa fi tasgabbiirratti xiyyeeffachuun ga'ee keenya gumaachuu feena jedhan.
ABO'n deebi'ee tokkoomuu danda'aa?
Dhaaboti siyaasaa maqaa ABO'n bakka gara garaatti wal qoodan deebi'anii tokkoomuuf carra qabuu jennee gaafannee turre.
''Garaagarummaa waan qabnuuf waggaa dheeraa haganaa adda baanee turre. Namni waan irratti waldhabe beeku nagaa buusee walitti deebi'ee waliin hojjechuuf isa hin dhibu'' jedhan.
Bara mootummaa Ce'umsaa Hayyu duree ABO kan turan Obbo Galaasaa Dilboo maaltu akka ABO adda qoqqoode dubbachuurraa of qusataniiru.
''Rakkoo adda nu baase gaafuma wal-arginee dubbanna malee amma yoon dubbadhe yaada kiyya qofa ta'a. Wal-arginee waan madaala qabu dubbanna'' jedhan.
Ta'us "namni waan irratti wal-dhabe tolchee hubate, wal-ta'uu akka hin dadhabne beekamaadha, keenyas kanarraa adda hin ta'u" jedhan.
"Namoota yaalii ajjeechaa MM Abiyyin himataman hin beeku" ABO
Ijoollummaasaaniirraa gara qabsootti makamuu kan dubbatan Obbo Galaasaa Dilboo ALA bara 1974 irraa eegalanii sadarkaa adda addaatti qabsoo Adda Bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa turani.
Uummanni akka hin dogongorree fi maqaansaanii sirriitti akka beekamuuf ABO Qaama Ce'umsaa jedhanii akka of moggaasan kan dubbatan Obbo Galaasaan kaayyoo ganamaa qabsoo bilisummaa Oromoorraa osoo hin goriin itti cichinee jirrra jedhan.
''Addi Bilisummaa Oromoo kaayyoonsaa ganamaa ummata Oromoof qabsaa'uu waan ta'eef dhaaba gurmuu tokkummaa fi sobboonummaa Oromoo jabeessuu kamiyyuu waliin taanee hojjenna. Warreen walitti dhufeenya keenya gufachiisuu barbaadan ummanni Oromoo waan beekuuf irratti hojjechuu qaba''
''Addi Bilisummaa Oromoo aduu amma bahuu barbaaddu kana kunuunfatee akka ummanni keenya ho'ifatu irratti cichee hojjetuu qaba'' jedhan.
"Kana kanaan duraarraa barannee carraa amma jirutti dhimma bahuun saba keenyaaf waa buusuu qabna'' jedhan.